Aqoonkaab 4 qodob oo aad taajir ku noqon kartid | Aqoonkaab
4 qodob oo aad taajir ku noqon kartid
Jul 19, 2015Arrimaha islaamka
Dhamaanteyn waxaynu rabnaa libaanta dunida iyo ta akhiraba halkan waxaan idinku soo gudbinayaa 4 qodob oo aad taajir ku noqon kartid noloshaada rasmigaa ee akhiro ugana sahay qadan kartid side alle sw sheegay diinteno waa fudeyd
1.seddex jeer akhri suuratul ikhlaas malin kasta:- hadad akhridi suradan sedex jeer malintii waxad ka dhigantahay mid akhriyey soddonka jis ee quraanka malintas.
2.salada cisho iyo ta subax waxad ku tukata jamaca :-sida aynu ognahay salada jamaca waxay 27 darajo dheertahay salada fardigaa sidaaso ay tahay hadana labadan saladood hadad jamaca ku tukatid way kasii ajar badanyihin .
sida nabi maxamed scw ino shegay salada cishe hadad jamac ku tukatid waxad la mid tahay adoo habeenka badhkii tukanayey hadii aad salada subax ku tukatid jamacana waxay la mid tahay adigoo habeenkiyo dhan tukanayey.
3.bisha ramadan soon kuna dar lixda shawaal:- sodonka cishe ee ramadan iyo lixda shawaal ,36 cisho hadad soonto waxad udhiganatahay qof somay sanadka oo dhan alle deeqsinimadisa 36 cisho ayuu waxu inooga yeelay 360 cisho ajarkeed .
4.100 jeer subxanalayso una shukri naq ilahay:-subxanalah iyo alxamdulilah waa laba kalmadoo oo carabkeena ku fudud balse xaga misaanka alle ku culus waxa alle ka masaxaya danbiyada yaryar ee aad samayso, isku day inaaad carabkaaga ku carbisid la qabsashada labadan kalmadood .
xaquuqda :Bahda aqoonkaab
Previous PostKa digtonow arimahan ka hor intanad guri yagleelin Next PostCALAAMADO KUU CADAYNAAYA IN CAAFIMAADKI JIDHKAGU HOOS UDHACAY.
One thought on “4 qodob oo aad taajir ku noqon kartid”
cabdiladif October 22, 2017 at 10:47 am